ကနီ နဲ့ ယငျးမာပငျ မှာ ဘာကွောငျ့ စခတှေ အကအြဆုံး မြားလာရတာလဲ? ( ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတှေ ရဲ့ ပွောငျးလဲလာတဲ့ ဗြူဟာသဈတကေို မခံကွတော့ဘူး။.....)
ကနီ နဲ့ ယငျးမာပငျ မှာ ဘာကွောငျ့ စခတှေ အကအြဆုံး မြားလာရတာလဲ? (
တဈနိုငျငံလုံးကို ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈသှားစခေဲ့တဲ့ တိုကျပှဲက သပွအေေး တိုကျပှဲ ဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးအရငျး က ဦးဆောငျ ဆရာတျောကို လာဖမျးတာကနေ ဖွဈတာပါ။ စခ တှဟော မွို့တှမှော run တဲ့ အထာအတိုငျး ကား ၄ စီး အငျအားအပွညျ့ နဲ့ ရှာထဲကို ဝငျလာပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး ရိုတျနကျ ညှငျးပနျးတာတှေ ဖွဈလာတော့ ရှာခံတှကေ ပွနျခုခံရငျးကနေ စဖွဈကွတာပါ။ သပွအေေး ဆိုတဲ့ ရှာလေးက ခပျသေးသေးလေး ၊ အိမျခွေ ၁၀၀ တောငျ ရှိပါ့မလား မသိဘူး။ တိုကျပှဲက ၄ နာရီ မထိုးခငျလောကျမှာ ဖွဈတယျ။
ကိုယျတှနေယျ က ကာကှယျရေးတှကေ တူမီးလကေ့ငျြ့ရငျး စိတျဓာတျကွှနတေဲ့ အခြိနျ ၊ လကျတညျ့ စမျးခငျြတာ နဲ့ ကှကျတိ ဖွဈသှားတယျ။ မနကျ မိုးလငျးတာနဲ့ တိုကျပှဲ ဖွဈတဲ့ နရောကို ယငျးမာပငျ ၊ ကနီ ၊ ဆားလငျးကွီး ၊ ပုလဲ နယျထဲက ရှာ ကာကှယျရေး အဖှဲ့တှေ အားလုံး တဈဖှဲဖှဲရောကျလာတယျ။ အငျးအားက စုစုပေါငျး ၁၅၀၀၀ အထကျမှာ ရှိမယျ။ ရှာထဲမှာ ရှိနတေဲ့ စခတှကေို ဝိုငျးထားတယျ။ ရှာက အိမျတှေ ထိမှာ စိုးလို့ သိပျတော့ မလုပျကွဘူး။ စခတှကေ သူတို့ အဝိုငျးခံရတော့ စဈကူတောငျးတယျ။ လာနိုငျတဲ့ လမျးကွောငျးတှကေို ပိတျဆို့ကွပွနျတယျ။ နခေ့ငျးပိုငျးရောကျတော့ သူတို့ အခွအေနေ မဟနျတော့မှနျးသဘောပေါကျပွီး စကျသနေပျတှေ တရစပျပဈကာ ဖောကျထှကျတယျ။
မီဒီယာတှကေတော့ အဲဒီပှဲမှာ စခ ၄၀ ကြျောလောကျ ကတြယျလို့ ရေးကွပမေယျ့ တကယျ့မွပွေငျမှာတော့ အတညျမပွုနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ခငျြးတှငျးမွဈ အနောကျကမျးက ပွညျသူတှဟော အဖှငျ့ပှဲမှာပဲ ဝိုငျးဆျောလိုကျရတော့ စိတျဓာတျတှေ အရမျးတကျသှားကွတယျ။ အဲဒီ အခကျြက တဈခဏတာ လမျးမှားဖို့ အစပြိုးလိုကျ သလိုပဲ။
တဈနရောရာမှာ တိုကျပှဲ ဖွဈတော့မယျတဲ့ ဆိုတဲ့ သတငျးထှကျတာ နဲ့ ကာကှယျရေးတှကေ အစုလိုကျ အပွုံလိုကျ ရောကျလာကွတာ။ ယငျးမာပငျ နယျထဲဖွဈရငျ ကနီက လာပူးပေါငျးတယျ။ ကနီ ဖွဈရငျလဲ ယငျးမာပငျ နယျသားတှေ ပါတာပဲ။ ပထမဆုံး ပှဲဦးထှကျမှာ အငျအား အလုံးအရငျး နဲ့ ဖိလိုကျရတော့ ၊ နောကျပှဲတှလေဲ အဲဒီ ဗြူဟာ အတိုငျး ဆကျသုံးတယျ။ ဒါပမေယျ့ စခ တှကေ ပရိုတှေ ဆိုတော့ ဗြူဟာ ခကျြခွငျး ပွောငျးတယျ။ တဖကျက အငျအား အဆမတနျ မြားတာလဲ သိတယျ။
တူမီး က အကှာအဝေး အမြားကွီး မရောကျတာကိုလဲ သဘောပေါကျတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ သပွအေေး ပှဲပွီး ကတညျးက ရိုးရိုး သနေပျ မသုံးတော့ဘူး။ အဝေးကနေ စကျသနေပျ နဲ့ တရစပျ ပတျဆှဲတာပဲ။ လညျရှညျ ဇရပျ တိုကျပှဲမှာ ပွညျသူတှေ တျောတျောမြားမြား ကဆြုံးပွီး ၊ ၇ ယောကျလောကျ အဖမျးခံလိုကျရတာ အဲဒီ အကွောငျးအရငျးတှကွေောငျ့။
နောကျတော့ ဒရုနျးတှနေဲ့ လမျးကွောငျး ကွိုကွညျ့တယျ။ RPG တှေ နဲ့ပါ လှမျးထုတော့တာ။ တဈဖကျက တူမီး သမားတှဖွေငျ့ ဘယျနရောကနေ ထုလို့ ထုမှနျးမသိဘူး။ ပွနျပဈရအောငျလဲ ရနျသူကို လှမျးမမွငျရဘူး။ ကစဉျ့ကလြားတှနေဲ့ ပွေးရတာပဲ။ အဲဒီလို နဲ့ ကွားထဲက ၁၀ ပှဲလောကျ ဟာ ဗြူဟာ အမှားတှေ ၊ ကိုယျ့ဘကျက အရအေတှကျမြားတဲ့ အခကျြကို အားကိုးလှနျးတာတှကွေောငျ့ တျောတျော ခံလိုကျရသေးတယျ။ သငျခနျးစာ ဆိုတာ အတှအေ့ကွုံကနေ ယူရတယျ ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ကာကှယျရေးတှကေ ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျ တိုကျပှဲတှကေို သိပျပွီး အာရုံ မကတြော့ဘူး။ ခွုံခို တိုကျပှဲတှေ ၊ မိုငျးဆှဲတာတှေ နဲ့ ပြောကျကွား လုပျဖို့ ပိုပွီး အားစိုကျလာကွတယျ။
ပထမဆုံး အောငျမွငျမှုက မုံရှာ – ကလေးဝ – ယာကွီးလမျး ၊ မိုငျတိုငျ ၁၈ အနီးက မှနျတောငျ အတကျမှာ ခြောငျးခှဲတဲ့ မိုငျးပဲ။ အသံကလဲ ကယျြတယျ ။ ကားတဈစီး ခကျြခွငျး မီးတှလေောငျတာ ကိုယျ့အိမျကနေ မီးခိုးတနျးကွီး အတိုငျးသား မွငျလိုကျရတယျ။ အဲဒီက စလို့ ဗြူဟာတှကေ တဈဖွေးဖွေး ပွောငျးလာတော့တာပဲ။ ရှာသားတှဟော သနေပျ ပဈထကျ ဖောကျခှဲရေးတှေ ပိုပွီး လကေ့ငျြ့လာတယျ။ စမျးသပျတယျ ။ ပိုကောငျးအောငျ ထပျပွီးထပျပွီး ပွုပွငျယူကွတယျ။ အခုတော့ စခတှေ နယျမွနေငျးပွီ ဆိုတဲ့သတငျး ကွားလဲ ၊ လှနျခဲ့တဲ့ တဈလ လောကျကလို စဈကူတှေ ကွိုပွီး မချေါကွတော့ဘူး။ ကိုယျ့ရှာနားနီး ရငျ ကိုယျ့ဖာသာ တိတျတိတျလေး ခြောငျးခကြွတော့တာ။ အပွနျအလှနျပဈတာမြိုးတှေ အထိ ဖွဈလာရငျတော့ ဘေးရှာတှကေ ခကျြခွငျး အားပေးဖို့ ရံထားကွတာ။
ဟိုနကေ့ သလောကျရှာ အနား မိုငျးဆှဲခံရတာ ၊ မနကေ့ ယာကွီး မရောကျခငျမှာ ထပျဆှဲခံရတာတှဟော ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတှေ ရဲ့ ပွောငျးလဲလာတဲ့ ဗြူဟာသဈတှပေဲ။ အဲဒီ နှဈပှဲဆိုရငျ စခ စုစုပေါငျး ၁၃ ယောကျထကျ မနညျး အျောဂဲနဈ ဖာတီလိုကျဇာ ဖွဈပွီး ၊ ဒဏျရာရသူလဲ တျောတျောမြားမှာ။ ပွညျသူဘကျကတော့ ခြှေးတောငျ မထှကျလိုကျဘူး။
ကနီ နဲ့ ယင်းမာပင် မှာ ဘာကြောင့် စခတွေ အကျအဆုံး များလာရတာလဲ? ( ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတွေ ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဗျူဟာသစ်တေကို မခံကြတော့ဘူး။…..)
တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲက သပြေအေး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်း က ဦးဆောင် ဆရာတော်ကို လာဖမ်းတာကနေ ဖြစ်တာပါ။ စခ တွေဟာ မြို့တွေမှာ run တဲ့ အထာအတိုင်း ကား ၄ စီး အင်အားအပြည့် နဲ့ ရွာထဲကို ဝင်လာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရိုတ်နက် ညှင်းပန်းတာတွေ ဖြစ်လာတော့ ရွာခံတွေက ပြန်ခုခံရင်းကနေ စဖြစ်ကြတာပါ။ သပြေအေး ဆိုတဲ့ ရွာလေးက ခပ်သေးသေးလေး ၊ အိမ်ခြေ ၁၀၀ တောင် ရှိပါ့မလား မသိဘူး။ တိုက်ပွဲက ၄ နာရီ မထိုးခင်လောက်မှာ ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်တွေနယ် က ကာကွယ်ရေးတွေက တူမီးလေ့ကျင့်ရင်း စိတ်ဓာတ်ကြွနေတဲ့ အချိန် ၊ လက်တည့် စမ်းချင်တာ နဲ့ ကွက်တိ ဖြစ်သွားတယ်။ မနက် မိုးလင်းတာနဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ နေရာကို ယင်းမာပင် ၊ ကနီ ၊ ဆားလင်းကြီး ၊ ပုလဲ နယ်ထဲက ရွာ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တွေ အားလုံး တစ်ဖွဲဖွဲရောက်လာတယ်။ အင်းအားက စုစုပေါင်း ၁၅၀၀၀ အထက်မှာ ရှိမယ်။ ရွာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စခတွေကို ဝိုင်းထားတယ်။ ရွာက အိမ်တွေ ထိမှာ စိုးလို့ သိပ်တော့ မလုပ်ကြဘူး။ စခတွေက သူတို့ အဝိုင်းခံရတော့ စစ်ကူတောင်းတယ်။ လာနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ကြပြန်တယ်။ နေ့ခင်းပိုင်းရောက်တော့ သူတို့ အခြေအနေ မဟန်တော့မှန်းသဘောပေါက်ပြီး စက်သေနပ်တွေ တရစပ်ပစ်ကာ ဖောက်ထွက်တယ်။
မီဒီယာတွေကတော့ အဲဒီပွဲမှာ စခ ၄၀ ကျော်လောက် ကျတယ်လို့ ရေးကြပေမယ့် တကယ့်မြေပြင်မှာတော့ အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ကမ်းက ပြည်သူတွေဟာ အဖွင့်ပွဲမှာပဲ ဝိုင်းဆော်လိုက်ရတော့ စိတ်ဓာတ်တွေ အရမ်းတက်သွားကြတယ်။ အဲဒီ အချက်က တစ်ခဏတာ လမ်းမှားဖို့ အစပျိုးလိုက် သလိုပဲ။
တစ်နေရာရာမှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တော့မယ်တဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်တာ နဲ့ ကာကွယ်ရေးတွေက အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရောက်လာကြတာ။ ယင်းမာပင် နယ်ထဲဖြစ်ရင် ကနီက လာပူးပေါင်းတယ်။ ကနီ ဖြစ်ရင်လဲ ယင်းမာပင် နယ်သားတွေ ပါတာပဲ။ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်မှာ အင်အား အလုံးအရင်း နဲ့ ဖိလိုက်ရတော့ ၊ နောက်ပွဲတွေလဲ အဲဒီ ဗျူဟာ အတိုင်း ဆက်သုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် စခ တွေက ပရိုတွေ ဆိုတော့ ဗျူဟာ ချက်ခြင်း ပြောင်းတယ်။ တဖက်က အင်အား အဆမတန် များတာလဲ သိတယ်။
တူမီး က အကွာအဝေး အများကြီး မရောက်တာကိုလဲ သဘောပေါက်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ သပြေအေး ပွဲပြီး ကတည်းက ရိုးရိုး သေနပ် မသုံးတော့ဘူး။ အဝေးကနေ စက်သေနပ် နဲ့ တရစပ် ပတ်ဆွဲတာပဲ။ လည်ရှည် ဇရပ် တိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ တော်တော်များများ ကျဆုံးပြီး ၊ ၇ ယောက်လောက် အဖမ်းခံလိုက်ရတာ အဲဒီ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်။
နောက်တော့ ဒရုန်းတွေနဲ့ လမ်းကြောင်း ကြိုကြည့်တယ်။ RPG တွေ နဲ့ပါ လှမ်းထုတော့တာ။ တစ်ဖက်က တူမီး သမားတွေဖြင့် ဘယ်နေရာကနေ ထုလို့ ထုမှန်းမသိဘူး။ ပြန်ပစ်ရအောင်လဲ ရန်သူကို လှမ်းမမြင်ရဘူး။ ကစဉ့်ကလျားတွေနဲ့ ပြေးရတာပဲ။ အဲဒီလို နဲ့ ကြားထဲက ၁၀ ပွဲလောက် ဟာ ဗျူဟာ အမှားတွေ ၊ ကိုယ့်ဘက်က အရေအတွက်များတဲ့ အချက်ကို အားကိုးလွန်းတာတွေကြောင့် တော်တော် ခံလိုက်ရသေးတယ်။ သင်ခန်းစာ ဆိုတာ အတွေ့အကြုံကနေ ယူရတယ် ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကာကွယ်ရေးတွေက ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲတွေကို သိပ်ပြီး အာရုံ မကျတော့ဘူး။ ခြုံခို တိုက်ပွဲတွေ ၊ မိုင်းဆွဲတာတွေ နဲ့ ပျောက်ကြား လုပ်ဖို့ ပိုပြီး အားစိုက်လာကြတယ်။
ပထမဆုံး အောင်မြင်မှုက မုံရွာ – ကလေးဝ – ယာကြီးလမ်း ၊ မိုင်တိုင် ၁၈ အနီးက မှန်တောင် အတက်မှာ ချောင်းခွဲတဲ့ မိုင်းပဲ။ အသံကလဲ ကျယ်တယ် ။ ကားတစ်စီး ချက်ခြင်း မီးတွေလောင်တာ ကိုယ့်အိမ်ကနေ မီးခိုးတန်းကြီး အတိုင်းသား မြင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီက စလို့ ဗျူဟာတွေက တစ်ဖြေးဖြေး ပြောင်းလာတော့တာပဲ။ ရွာသားတွေဟာ သေနပ် ပစ်ထက် ဖောက်ခွဲရေးတွေ ပိုပြီး လေ့ကျင့်လာတယ်။ စမ်းသပ်တယ် ။ ပိုကောင်းအောင် ထပ်ပြီးထပ်ပြီး ပြုပြင်ယူကြတယ်။ အခုတော့ စခတွေ နယ်မြေနင်းပြီ ဆိုတဲ့သတင်း ကြားလဲ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်ကလို စစ်ကူတွေ ကြိုပြီး မခေါ်ကြတော့ဘူး။ ကိုယ့်ရွာနားနီး ရင် ကိုယ့်ဖာသာ တိတ်တိတ်လေး ချောင်းချကြတော့တာ။ အပြန်အလှန်ပစ်တာမျိုးတွေ အထိ ဖြစ်လာရင်တော့ ဘေးရွာတွေက ချက်ခြင်း အားပေးဖို့ ရံထားကြတာ။
ဟိုနေ့က သလောက်ရွာ အနား မိုင်းဆွဲခံရတာ ၊ မနေ့က ယာကြီး မရောက်ခင်မှာ ထပ်ဆွဲခံရတာတွေဟာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတွေ ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဗျူဟာသစ်တွေပဲ။ အဲဒီ နှစ်ပွဲဆိုရင် စခ စုစုပေါင်း ၁၃ ယောက်ထက် မနည်း အော်ဂဲနစ် ဖာတီလိုက်ဇာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဒဏ်ရာရသူလဲ တော်တော်များမှာ။ ပြည်သူဘက်ကတော့ ချွေးတောင် မထွက်လိုက်ဘူး။
၂၀၁၉တှငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နဲ့မွနျမာကွားအငွငျးပှားမှုဖွဈခဲ့သော စိနျ့မာတငျကြှနျးတှငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့မှတငျ့ဖကျြဒုံးမြားစတငျတပျဖွနျ့